Izinto eziluncedo kuwe
UNYANGO NGAPHANDLE attachments
An protocol esebenzayo akusafuneki kuwe ukuba ngawo ukuba usebenzise iinkqubo okubambelela abangabancedani ukuba ukushenxiswa amazinyo.
Bhalisa kule ndawo ukufotokopa zonyango luqala ikhosi ividiyo yethu inkqubo yoqeqesho,.
Cwangcisa kunye ezamahala iimaski xa kwimeko eyigqibile unyango kubekho nokuyifeza okanye kwimeko yelahleko okanye ukwaphuka imaski.
Ungathumela iifoto le mifuziselo yeenyawo kumnxeba yefowuni luhlala lufumaneka kwaye ufumane iimpendulo kwimibuzo yakho yonke kumgangatho ofanayo, eziza zilawulwa isisombululo monitor aphezulu ngqo; ngelixa isigulana nangoku kufundisiso.
UNCEDO WOKUQALISWA POST IMVELISO
Cwangcisa con ividiyo, ukhombise, valet ngaso. Kwakhona ziyafumaneka naluphi na ungquzulwano ngexesha inkqubela-phambili yetyala.
NEKHITI ZORHWEBO HALL imbonakalo
Cofa apha uze ucele ncwadana free kuzisa etafileni okanye kumgangatho, iividiyo zolwazi kunye neencwadana izigulane zakho.
baphathwe’ ICHANILE KUNYE FAST NGAPHANDLE iimaski ATTACHMENT WITH ngaphaya Ultra
Ngoku- yazalisekiswa iseti kabini aligners EZIZEZINYE UP yaye UP ukudlulisa ukukhanya kunye nemikhosi rhoqo kuzo zonke inyathelo kunye noxinzelelo amanqaku (DIVOT) Family’ eyenziwe yinkampani ukunciphisa zonke criticality ngayo imaski aligners mono. Kunye extrusions kunye nokujikeleziswa ngaphandle attachment. Kwaye kweenzingo agudileyo ngakumbi nesempilweni kunye nokulandelwa engcono nomonde, Bongani "Smile Glass" ubuchwepheshe.